» तरुलले राम्रो मूल्य पाएपछि सर्लाहीका किसान दङ्ग
तरुलले राम्रो मूल्य पाएपछि सर्लाहीका किसान दङ्ग
२०७८ पुष २८, बुधबार १८:०७
सर्लाही । उत्पादनको मुख्य समयमा तरुलले राम्रो मूल्य पाएपछि सर्लाहीका किसान दङ्ग छन् । माघे सङ्क्रान्ति नजिकिएसँगै तरुलको मूल्य राम्रो पाएपछि जिल्लाका किसान दङ्ग भएका हुन् ।
माघे सङ्क्रान्तिमा तरुल बिक्री ह्वातै बढेको र मूल्य पनि राम्रो पाउन थालेपछि यहाँका किसानको तरुलखेतीतर्फ आकर्षण बढ्दै गएको पाइन्छ । माघे सङ्क्रान्तिका दिन फलाहारको रुपमा प्रयोग हुने तरुल खनेर निकाल्न जिल्लाको वाग्मती र बरहथना नगरपालिका क्षेत्रका किसानलाई भ्याइनभ्याइ छ । ती क्षेत्रका खेतभरी तरुल खनिरहेको दृष्य बग्रेल्ती देखिन्छ ।
विगतका वर्षको तुलनामा तरुलले दोब्बर बढी मूल्य पाएपछि किसान दङ्ग छन् । गतवर्ष प्रतिकिलो ३५ देखि ४० मा बिक्री भएको तरुल यो वर्ष प्रतिकिलो ५० देखि ८० मा बिक्री भइरहेको छ । लामो समयदेखि व्यावसायिक रुपमा तरुल खेती गर्दै आएका वाग्मती नगरपालिका–५ राजघाटका किसान यमकुमार मगरले भने, “यसवर्ष निकै राम्रो मूल्य पाएका छौं, अन्य वर्षको तुलनामा धेरै व्यापारी तरुल किन्न आइरहेका छन् । यसरी मूल्य पाउने हो भने किसानलाई लागत र परिश्रमअनुसार राम्रो फाइदा हुनेछ ।”
उनका अनुसार माघे सङ्क्रान्ति नजिकिएसँगै किसानले उत्पादन गरेको तरुल लिन ठेकेदार खेतबारीमै पुगेका छन् । यसवर्ष १० कठ्ठा जमिनमा तरुलखेती गरेको र तरुलले राम्रो मूल्य पाएपछि आफूलाई खुसी लागेको वाग्मती नगरपालिका–८ शङ्करपुरका किसान जगबहादुर महतोको भनाइ छ । उनले प्रतिकठ्ठा २५ हजारमा खेतबाटै व्यापारीले तरुल लैजाने गरेको बताए ।
सबै खर्च कटाएर तरुलखेतीबाट प्रतिकठ्ठा रु १८ देखि २० हजार आम्दानी हुने गरेको किसानको भनाइ छ । माघे सङ्क्रान्तिमा विशेष फलहारको रुपमा प्रयोग गरिने तरुल अन्य समयमा तरकारीको रुपमासमेत प्रयोग गर्न लैजाने गरेको किसानले बताए ।
वैशाखमा रोपेको तरुल तीन दिनयता महतो आफैँले मजदुर लगाएर खनाइरहेका छन् । “व्यापारीले उचित मूल्य दिए भने यहीं बेच्छु, नत्र ट्रकमा हालेर काठमाडौं लैजान्छु”, उनले भने, “काठमाडौंसम्म पुर्‍याउन सके अझ राम्रो मूल्य पाइन्छ ।”
तरुलको फलाइ अनि जात हेरेर व्यापारीले मूल्य दिन्छन् उनले भने, “पाताले तरुलको बढी मूल्य पाइन्छ भने आकासे तरुलको कम मूल्य आउँछ ।” व्यापारीले सर्लाहीको तरुल काठमाडौं, पोखरा, धनगढी, वीरगञ्ज, इटहरीलगायत मुलुकका प्रमुख सहरसम्म पुर्‍याउने गरेका छन् । फागुनदेखि जेठसम्म रोपिने तरुल पुसदेखि फागुनसम्म खन्ने गरिन्छ ।
तरुलखेती गर्दा जमिन हेरेर बीउ, खनजोत, मलखाद र गोडमेलसमेत गर्दा रु सात हजारदेखि १० हजार प्रतिकठ्ठा लगानी हुने गरेको किसानको भनाइ छ । यो मौसममा तरुल प्रतिकठ्ठा रु २८ हजारदेखि ३० हजारसम्म आम्दानी हुने किसानको अपेक्षा छ । राम्रो उत्पादन हुँदा तरुल प्रतिकठ्ठा ८ देखि १० क्विन्टलसम्म उत्पादन हुने कृषि ज्ञान केन्द्र मलङ्गवा सर्लाहीका कार्यालय प्रमुख कमलदेवप्रसाद कुशवाहले बताए ।
उनका अनुसार यस क्षेत्रमा झुसे (पाताले) र रातो तरुलको खेती हुँदै आएको छ । जिल्लामा मात्र यसवर्ष करिब २८५ हेक्टर क्षेत्रफलमा तरुलखेती भएको कृषि ज्ञान केन्द्र मलङ्गवा सर्लाहीले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार जिल्लामा प्रत्येक वर्ष करिब ५०० टन तरुल उत्पादन हुने गरेको छ ।
यसवर्ष बढी वर्षात् भएका कारण तरुल उत्पादनमा कमी आउने हो कि भन्ने किसानलाई चिन्ता रहेको थियो । तर कम उत्पादन भए पनि मूल्य राम्रो पाउँदा आफूहरुलाई घाटा नहुने किसानले बताएका छन् ।
टप फाइभ रेस : ग्लोबल, एनआईसी, नबिल, एनएमबि र प्राइममध्ये कुन इन्डिकेटरमा को अब्बल ? (इन्फोग्राफ)
चीनको नाका बन्दी: ६ महिनादेखि नेपाली उत्पादन एक रुपैयाँको पनि निर्यात हुन दिएन
घट्याे सोलार विद्युतकाे मूल्य, अब खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पीपीए
शोभाकान्तको अर्को बेइमानीः आफैं सञ्चालक भएको इमर्जिङ नेपाललाई आईपीओ अनुमति
‘लाइबोर’ फेजआउट भएपछि राष्ट्र बैंकले तोक्यो विदेशबाट ल्याउने ऋणको ‘बेञ्चमार्क’ दर
देउवा सरकारको कामलाई केपी ओलीद्वारा भरमग्दुर आलोचना, आकाशतिर थुक्दा आफ्नै मुखमा छिटा !
माघ २३ गतेसम्म सेयर किन्ने लगानीकर्ताले ज्योति लाइफको १० प्रतिशत बोनस पाउने
नेशनल लाइफका लगानीकर्तालाई बम्पर लाभांश, बोनस र नगद कति ?
च्याउ उत्पादक किसान संघद्वारा अवैध च्याउ आयातमा रोक लगाउन मा
माघ २१ अगावै सेयर किन्नेले मात्र शिखरको १०:३ हकप्रदमा आवेदन दिन पाउने
कुन वाणिज्य बैंकको कुन इन्डिकेटर कस्तो ? (विस्तारमा हेर्नुहोस्)
मन्त्रिपरिषद बैठक – जापानको दुई अर्ब ६१ करोडसम्मको अनुदान स्वीकार
२७ वटै वाणिज्य बैंकको वित्तीय विवरण सार्वजनिकः स्प्रेड घटेपनि घटेन आम्दानी, नाफा १० प्रतिशतले बढ्यो
सर्वोच्चको फैसलाः अवकाश हुँदा पाउने सुविधामा लाग्ने १५ प्रतिशत करको दर ५ मा झर्‍यो
‘ऋणीको संरक्षण नगरे बैंक चल्दैन, लगानीकर्ताले प्रतिफल र सरकारले कर पाउँदैन’
‘नयाँ लाइसेन्स दिँदा ‘जस्टिफाई’ गर्ने काम नियामककै हो, लगानी गर्नेले अवसर हेर्लान्’
‘५ वर्षमा सेयर बेचेर ५ गुणा कमाउन मिल्ने भएकाले बीमा कम्पनीको लाइसेन्स किन्नेको ताँती छ’
राजनीतिको झोलाभन्दा कृषिको बोरा नै ठीक
लोकेन्द्र विष्ट मगर, पूर्व मन्त्री
कतिपय समूहहरू बिमा कम्पनीको अनुमति लिने भनेर पैसा बोकेर बसेका छन्